ခွင့်တူညီ မျှတဲ့ ပြည်ထောင်စုကြီး ဆိုပြီး အမြဲအနှိမ် ခံနေရတဲ့ တနင်္သာရီသား တဦး ရဲ့ ရင်ဖွင့်သံ – Let Pan Daily
တနသာင်္ရီတိုင်းသားတွေ ဆီက ထွက်သွားတဲ့ Gas တွေကို ပြည်ပပို့ တဲ့အပြင် အစိုးရကပြည်မကြီးကိုယူသွားပြီးတယူနစ် ၇၅ ကျပ်နှုန်းနဲ့ မဟာဓာတ်အားလိုင်းပေါ်တင်ပြီးပေးတယ်… ကိုယ်တွေဆီမှာကျ ဒီ Gas ကို % နည်းနည်းလေးတောင် free မရတဲ့အပြင် လျှပ်စစ်ထုတ်ဖို့ တောင် အစိုးရဆီက export ​ဈေးနဲ့ပြန်​ဝယ်​ရပြီး လျှပ်​စစ်​ကိုတယူနစ်​ ၂၃၈ ကျပ်​နဲ့ သုံးရတယ်​…
ဒါတောင် Gas Stations တွေ ရှိတဲ့ ထားဝယ် မှာပဲရတာနော်… ကျန်တဲ့ မြိတ်နဲ့ ကော့သောင်းခရိုင်မှာဆို ဒီဇယ်နဲ့ ပေးတဲ့လျှပ်စစ်ကို တယူနစ် ၃၀၀ ကျော်ကနေ ၈၀၀ / ၁၀၀၀ လောက်အထိပေးသုံးနေရတာ… အခု ကိုဗစ်ကာလမှာ ဗဟိုအစိုးရက တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဧပြီနဲ့ မေလ အတွက် ယူနစ်​ ၁၅၀+၇၅ ကျသင့်ငွေ free အစီအစဉ်လုပ်တယ်…
ပထမတော့ပျော် မိတာပေါ့… ငါတို့ သွေးချွေးတွေနဲ့ ရွေးခဲ့ရတဲ့အစိုးရ ငါတို့ ကိုကြည့်ပြီဆိုပြီး… တနသာင်္ရီတတိုင်းလုံး ရာဇဝင်မရိုင်းတဲ့ 100%အနီရောင်လွှမ်းအောင် မဲပေးခဲ့ရကျိုးနပ်ပြီပေါ့… ပျော်နေလို့ မဆုံးသေးဘူး ဒီအစီအစဉ်မှာတနသာင်္ရီမပါလို့ ဆိုလာရော… တိုင်းအစိုးရက ပြည်ထောင်စု ရဲ့ ယူနစ် Free ကိစ္စအတွက်တတိုင်းလုံးက အစိုးရကို Royalty fee(ခိုင်ကြေး)သွင်းထားတဲ့ မီတာအလုံးရေ ၁၄၀၀၀၀ ကျော်အတွက် ပထမအကြိမ် ယူနစ် ၁၅၀ free ပေးဖို့ကျပ် ၅.၈ ဘီလျံကျော် ဗဟိုအစိုးရဆီတောင်းခဲ့ပေမယ့် ပြန်ကြားလာတာက မဟာ ဓာတ်အားလိုင်းပြင်ပကမို့ထောက်ပံ့မပေးနိုင်ပါတဲ့…
အကြောင်းပြချက်က မဟာဓာတ်အား လိုင်းမရှိတဲ့တိုင်းမို့တိုင်းအစိုးရကကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ ကိုယ်လုပ်ပါတဲ့လား… ကိုယ်တွေမှာစိတ်ပျက်ချက်က ပြောစရာကို မလိုတော့… တနိုင်ငံလုံးတန်းတူညီတူမပေးနိုင်မှတော့ ဘာလို့ တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာလို့ခေါင်းစဉ်တပ်သေးတာလဲ… အခုက ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်လို့ ခေါ်ပြီး တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ် ၁၄ ခုပဲရှိတာကိုမှ ဟိုဟာက ဟိုလို ဒီဟာက ဒီလိုဆိုပြီးခွဲခြားခံနေရသေး…
ဗဟိုအစိုးရရဲ့ စီမံမှုက အံ့သြ လက်လန်မိ… ဒီ Free ပေးမယ့် မီတာခကိုလိုချင်လွန်းလို့အခုလိုပြောနေတာတော့မဟုတ်ဘူး… တနသာင်္ရီတိုင်းသားတွေ ဆိုတာက သာမန်လူတန်းစားတောင်တစ်လကို မီတာခ သောင်းချီ သိန်းချီပေးပြီးသုံးနေတဲ့သူတွေမို့မဟာဓာတ်အားလိုင်းလို့ ခေါ်တဲ့နေရာ က အစိုးရဈေးနဲ့ တယူနစ် ၇၅ ကျပ်နဲ့ တွက်ရင် ၁၅၀+၇၅= ၂၂၅ ယူနစ်အတွက် မြန်မာငွေ ၁၆၈၀၀ လောက်က တနသာင်္ရီတိုင်းသားတွေအတွက် တစ်လစာမီတာခရဲ့ တစ်ဝက်လောက်ပဲရှိသေးတော့ သိပ်ပြီးရင်တော့မခုန်ဘူး…
ဒါပေမယ့် အခုလိုခွဲခြားခံရတာက အခြားမဟာ ဓာတ်​အား လိုင်းမရတဲ့​ နေရာကဆိုခံသာ​သေးတယ်​… အခုကကျ​နော်​တို့ ဆီ က gas ကိုထုတ်​သွားပြီး ပြည်​မမှာ တယူနစ်​ ၇၅ ကျပ်​နဲ့ ​ပေးခဲ့တာကို တနသာင်္ရီတိုင်းသားတွေဘာမှမပြောဘဲ ဒီအတိုင်းသည်းခံရင်းသည်းခံငြိမ်နေပေးနေတာ ကိုမှ ကတုံးပေါ်ထိပ် ကွက်လုပ်သွားတာကိုခံပြင်းတာ…
တနသာင်္ရီတိုင်းကလူတွေ လျှပ်စစ်အတွက် ပြည်ထောင်စုဆီက ဘာမှခံစားခွင့်မရပေမယ့် ယူနစ်ဈေးကိုအမြင့်ဆုံးနဲ့ သုံးနေရပေမယ့် အစိုးရဆီ Royalty fee ကြေး လစဉ်ဆောင်ပေးနေကြတာပါ… အခုတော့ဘာတဲ့… မဟာဓာတ်​အားလိုင်းမ​ရောက်​တဲ့​နေရာမို့အကျုံးမဝင်​ဘူးတဲ့လား… ခံပြင်းစရာကဒီထက်ဆိုးတာမရှိ…
တနသာင်္ရီတိုင်းကို မဟာဓာတ်အားလိုင်း ဘယ်နေ့ ဘယ်တော့ ဆွဲတော့မယ်လို့အိပ်မက်တွေပေးနေတာခုဆို ၅ နှစ်ကျော်နေဘီ… ခေတ်အဆက်ဆက်တနသာင်္ရီတိုင်းသားတွေ သည်းခံရင်းသည်းခံလာတာ အခုတော့စော်ကားခံလိုက်ရတာပဲ… အခုလိုလုပ်တဲ့ပုံစံက ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့အထဲမှာ တနသာင်္ရီတိုင်းရောပါမှ ပါရဲ့ လားလို့မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်ရတယ်…
ဗဟိုအစိုးရဆီက ထောက်ပံ့မှုမရတော့ တိုင်းအစိုးရက သူတို့ ဆီမှာ ရှိတဲ့ ဘတ်ဂျက်ထဲက ရသလောက်ခြစ်ကုတ်ထုတ်ပြီး ဧပြီလအတွက် မီတာတွေကို တစ်လုံး ၅၀၀၀ ထောင်နှုန်းနဲ့သိန်း ၇၀၀၀ ကျော်ဖိုးထောက်ပံ့ပေးဖို့ လုပ်တယ်… ဒီဘတ်ဂျက်တွေဆိုတာ ကျနော်တို့ တနသာင်္ရီတိုင်းက လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာသုံးဖို့ဗဟိုအစိုးရကချပေးထားတဲ့ ဘတ်ဂျက်… ဆိုတော့ အခုလိုလျှပ်စစ်အတွက်ထောက်ပံ့ဖို့တနသာင်္ရီတိုင်းကိုဗဟိုအစိုးရကမျက်ကွယ်ပြုထားချိန် တိုင်းအစိုးရဘတ်ဂျက်ထဲကအခုလိုထုတ်သုံးတာက တိုင်းထဲကလိုအပ်တဲ့နေရာတွေအတွက် နစ်နာမှုတွေ ရှိသွားတယ်…
ဒါကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ? တနသာင်္ရီတိုင်းသားတွေလိုတာ ဒီလိုထောက်ပံ့ တဲ့ငွေကြေးတွေမဟုတ်ဘူး ပြည်ထောင်စုဆိုတဲ့ တန်းတူညီမျှမှုကိုလိုချင်တာ… ရန်ကုန်မှာ ၁ ကျပ်သုံးရင် ကျန်တဲ့တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်တွေလည်း ၁ ကျပ်ပဲဖြစ်ရမယ်… နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ ဗဟိုအစိုးရက ပြည်ထောင်စုလို့ အတွင်တွင်ပြောနေပေမယ့် အခုလိုနိုင်ငံသားတိုင်း တန်းတူညီမျှဖြစ်အောင် မစီမံပေးနိုင်တာကိုပါပဲ…
အခုဆို တနသာင်္ရီတိုင်း သားတွေက ခေတ်အဆက်ဆက် အပယ်ခံဖြစ်နေရတာကို သည်းခံနေရတဲ့စိတ်တွေပေါက်ကွဲထွက်လာပြီ… ဒီအတွက်လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ပေးဆပ်မှုအကြီးကြီးမကြာခင်ကြုံတွေ့ ရမယ်ဆိုတာက သေချာနေတဲ့အခြေအနေတခုပဲ… တနသာင်္ရီတိုင်းသားတွေဟာ သစ္စာရှိတယ် သည်းခံ တတ်တယ် မဟုတ်မခံတတ်ဘူးဆိုတာ ရှေ့ မှာသက်သေတွေအများကြီးပဲ…
မြန်မာနိုင်ငံတော်သီချင်းကြုံ လို့ ဆိုဖြစ်ရင်တောင် ‘ခွင့်တူညီမျှဝါဒဖြူစင်တဲ့မြေ’ ဆိုတဲ့စာသားဆီရောက်ရင် တနသာင်္ရီတိုင်းသားတွေဆက်ဆိုဖို့ လိုသေးလား ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်… ခဗျားတို့ ဗဟိုအစိုးရကလူတွေလည်း အဲဒီစာသားကို လိပ်ပြာသန့် သန့် နဲ့ ဆိုနိုင်ဖို့ကြိုးစားကြပေါ့ဗျာ… တနသာင်္ရီတိုင်း ဆိုတာ ဖိနှိပ်ခံဖို့အသုံးချခံဖို့နေရာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ သိထားကြပါ… ဒါပဲပြောချင်တယ်…
တနသာင်္ရီတိုငျးသားတှေ ဆီက ထှကျသှားတဲ့ Gas တှကေို ပွညျပပို့တဲ့အပွငျ အစိုးရကပွညျမကွီးကိုယူသှားပွီးတယူနဈ ၇၅ ကပျြနှုနျးနဲ့မဟာဓာတျအားလိုငျးပျေါတငျပွီးပေးတယျ… ကိုယျတှဆေီမှာကြ ဒီ Gas ကို % နညျးနညျးလေးတောငျ free မရတဲ့အပွငျ လြှပျစဈထုတျဖို့တောငျ အစိုးရဆီက export ဈေးနဲ့ ပွနျဝယျရပွီး လြှပျစဈကိုတယူနဈ ၂၃၈ ကပျြနဲ့သုံးရတယျ…
ဒါတောငျ Gas Stations တှေ ရှိတဲ့ ထားဝယျ မှာပဲရတာနျော… ကနျြတဲ့ မွိတျနဲ့ကော့သောငျးခရိုငျမှာဆို ဒီဇယျနဲ့ပေးတဲ့လြှပျစဈကို တယူနဈ ၃၀၀ ကြျောကနေ ၈၀၀ / ၁၀၀၀ လောကျအထိပေးသုံးနရေတာ… အခု ကိုဗဈကာလမှာ ဗဟိုအစိုးရက တနိုငျငံလုံးအတိုငျးအတာနဲ့ ဧပွီနဲ့မလေ အတှကျ ယူနဈ ၁၅၀+၇၅ ကသြငျ့ငှေ free အစီအစဉျလုပျတယျ…
ပထမတော့ပြျော မိတာပေါ့… ငါတို့သှေးခြှေးတှနေဲ့ရှေးခဲ့ရတဲ့အစိုးရ ငါတို့ကိုကွညျ့ပွီဆိုပွီး… တနသာင်္ရီတတိုငျးလုံး ရာဇဝငျမရိုငျးတဲ့ 100%အနီရောငျလှမျးအောငျ မဲပေးခဲ့ရကြိုးနပျပွီပေါ့… ပြျောနလေို့မဆုံးသေးဘူး ဒီအစီအစဉျမှာတနသာင်္ရီမပါလို့ဆိုလာရော… တိုငျးအစိုးရက ပွညျထောငျစု ရဲ့ယူနဈ Free ကိစ်စအတှကျတတိုငျးလုံးက အစိုးရကို Royalty fee(ခိုငျကွေး)သှငျးထားတဲ့ မီတာအလုံးရေ ၁၄၀၀၀၀ ကြျောအတှကျ ပထမအကွိမျ ယူနဈ ၁၅၀ free ပေးဖို့ ကပျြ ၅.၈ ဘီလြံကြျော ဗဟိုအစိုးရဆီတောငျးခဲ့ပမေယျ့ ပွနျကွားလာတာက မဟာ ဓာတျအားလိုငျးပွငျပကမို့ ထောကျပံ့မပေးနိုငျပါတဲ့…
အကွောငျးပွခကျြက မဟာဓာတျအား လိုငျးမရှိတဲ့တိုငျးမို့ တိုငျးအစိုးရကကိုယျ့အစီအစဉျနဲ့ကိုယျလုပျပါတဲ့လား… ကိုယျတှမှောစိတျပကျြခကျြက ပွောစရာကို မလိုတော့… တနိုငျငံလုံးတနျးတူညီတူမပေးနိုငျမှတော့ ဘာလို့တနိုငျငံလုံးအတိုငျးအတာလို့ ခေါငျးစဉျတပျသေးတာလဲ… အခုက ပွညျထောငျစု သမ်မတမွနျမာနိုငျငံတျောလို့ချေါပွီး တိုငျးဒသေကွီးနဲ့ပွညျနယျ ၁၄ ခုပဲရှိတာကိုမှ ဟိုဟာက ဟိုလို ဒီဟာက ဒီလိုဆိုပွီးခှဲခွားခံနရေသေး…
ဗဟိုအစိုးရရဲ့စီမံမှုက အံ့သွ လကျလနျမိ… ဒီ Free ပေးမယျ့ မီတာခကိုလိုခငျြလှနျးလို့ အခုလိုပွောနတောတော့မဟုတျဘူး… တနသာင်္ရီတိုငျးသားတှေ ဆိုတာက သာမနျလူတနျးစားတောငျတဈလကို မီတာခ သောငျးခြီ သိနျးခြီပေးပွီးသုံးနတေဲ့သူတှမေို့ မဟာဓာတျအားလိုငျးလို့ချေါတဲ့နရော က အစိုးရဈေးနဲ့တယူနဈ ၇၅ ကပျြနဲ့တှကျရငျ ၁၅၀+၇၅= ၂၂၅ ယူနဈအတှကျ မွနျမာငှေ ၁၆၈၀၀ လောကျက တနသာင်္ရီတိုငျးသားတှအေတှကျ တဈလစာမီတာခရဲ့တဈဝကျလောကျပဲရှိသေးတော့ သိပျပွီးရငျတော့မခုနျဘူး…
ဒါပမေယျ့ အခုလိုခှဲခွားခံရတာက အခွားမဟာ ဓာတျအား လိုငျးမရတဲ့ နရောကဆိုခံသာသေးတယျ… အခုကကနြျောတို့ဆီ က gas ကိုထုတျသှားပွီး ပွညျမမှာ တယူနဈ ၇၅ ကပျြနဲ့ပေးခဲ့တာကို တနသာင်္ရီတိုငျးသားတှဘောမှမပွောဘဲ ဒီအတိုငျးသညျးခံရငျးသညျးခံငွိမျနပေေးနတော ကိုမှ ကတုံးပျေါထိပျ ကှကျလုပျသှားတာကိုခံပွငျးတာ…
တနသာင်္ရီတိုငျးကလူတှေ လြှပျစဈအတှကျ ပွညျထောငျစုဆီက ဘာမှခံစားခှငျ့မရပမေယျ့ ယူနဈဈေးကိုအမွငျ့ဆုံးနဲ့သုံးနရေပမေယျ့ အစိုးရဆီ Royalty fee ကွေး လစဉျဆောငျပေးနကွေတာပါ… အခုတော့ဘာတဲ့… မဟာဓာတျအားလိုငျးမရောကျတဲ့နရောမို့ အကြုံးမဝငျဘူးတဲ့လား… ခံပွငျးစရာကဒီထကျဆိုးတာမရှိ…
တနသာင်္ရီတိုငျးကို မဟာဓာတျအားလိုငျး ဘယျနဘေ့ယျတော့ ဆှဲတော့မယျလို့ အိပျမကျတှပေေးနတောခုဆို ၅ နှဈကြျောနဘေီ… ခတျေအဆကျဆကျတနသာင်္ရီတိုငျးသားတှေ သညျးခံရငျးသညျးခံလာတာ အခုတော့စျောကားခံလိုကျရတာပဲ… အခုလိုလုပျတဲ့ပုံစံက ပွညျထောငျစုမွနျမာနိုငျငံတျောဆိုတဲ့အထဲမှာ တနသာင်္ရီတိုငျးရောပါမှ ပါရဲ့လားလို့ မေးခှနျးထုတျစရာဖွဈရတယျ…
ဗဟိုအစိုးရဆီက ထောကျပံ့မှုမရတော့ တိုငျးအစိုးရက သူတို့ဆီမှာ ရှိတဲ့ ဘတျဂကျြထဲက ရသလောကျခွဈကုတျထုတျပွီး ဧပွီလအတှကျ မီတာတှကေို တဈလုံး ၅၀၀၀ ထောငျနှုနျးနဲ့ သိနျး ၇၀၀၀ ကြျောဖိုးထောကျပံ့ပေးဖို့လုပျတယျ… ဒီဘတျဂကျြတှဆေိုတာ ကနြျောတို့တနသာင်္ရီတိုငျးက လိုအပျတဲ့နရောတှမှောသုံးဖို့ ဗဟိုအစိုးရကခပြေးထားတဲ့ ဘတျဂကျြ… ဆိုတော့ အခုလိုလြှပျစဈအတှကျထောကျပံ့ဖို့ တနသာင်္ရီတိုငျးကိုဗဟိုအစိုးရကမကျြကှယျပွုထားခြိနျ တိုငျးအစိုးရဘတျဂကျြထဲကအခုလိုထုတျသုံးတာက တိုငျးထဲကလိုအပျတဲ့နရောတှအေတှကျ နဈနာမှုတှေ ရှိသှားတယျ…
ဒါကိုဘယျလိုဖွရှေငျးကွမလဲ? တနသာင်္ရီတိုငျးသားတှလေိုတာ ဒီလိုထောကျပံ့ တဲ့ငှကွေေးတှမေဟုတျဘူး ပွညျထောငျစုဆိုတဲ့ တနျးတူညီမြှမှုကိုလိုခငျြတာ… ရနျကုနျမှာ ၁ ကပျြသုံးရငျ ကနျြတဲ့တိုငျးနဲ့ပွညျနယျတှလေညျး ၁ ကပျြပဲဖွဈရမယျ… နောကျဆုံးပွောခငျြတာကတော့ ဗဟိုအစိုးရက ပွညျထောငျစုလို့အတှငျတှငျပွောနပေမေယျ့ အခုလိုနိုငျငံသားတိုငျး တနျးတူညီမြှဖွဈအောငျ မစီမံပေးနိုငျတာကိုပါပဲ…
အခုဆို တနသာင်္ရီတိုငျး သားတှကေ ခတျေအဆကျဆကျ အပယျခံဖွဈနရေတာကို သညျးခံနရေတဲ့စိတျတှပေေါကျကှဲထှကျလာပွီ… ဒီအတှကျလကျရှိအစိုးရအနနေဲ့ ပေးဆပျမှုအကွီးကွီးမကွာခငျကွုံတှရေ့မယျဆိုတာက သခြောနတေဲ့အခွအေနတေခုပဲ… တနသာင်္ရီတိုငျးသားတှဟော သစ်စာရှိတယျ သညျးခံ တတျတယျ မဟုတျမခံတတျဘူးဆိုတာ ရှမှေ့ာသကျသတှေအေမြားကွီးပဲ…
မွနျမာနိုငျငံတျောသီခငျြးကွုံ လို့ဆိုဖွဈရငျတောငျ ‘ခှငျ့တူညီမြှဝါဒဖွူစငျတဲ့မွေ’ ဆိုတဲ့စာသားဆီရောကျရငျ တနသာင်္ရီတိုငျးသားတှဆေကျဆိုဖို့လိုသေးလား ကိုယျတိုငျစဉျးစားနရေတဲ့အခွအေနဖွေဈနတေယျ… ခဗြားတို့ဗဟိုအစိုးရကလူတှလေညျး အဲဒီစာသားကို လိပျပွာသနျ့သနျ့နဲ့ဆိုနိုငျဖို့ ကွိုးစားကွပေါ့ဗြာ… တနသာင်္ရီတိုငျး ဆိုတာ ဖိနှိပျခံဖို့ အသုံးခခြံဖို့ နရောတဈခုမဟုတျဘူးဆိုတာတော့ သိထားကွပါ… ဒါပဲပွောခငျြတယျ…
မနက်က ပိုး​တွေ့ လူနာ အမှတ် (၁၉၀) ​တောင်ကုတ် ​ဆေးရုံ ကို ​ရေလမ်းမှ လာ​နေ​သော Videoဖိုင်
အလှူအတန်း ရက်ရော ပြီး ချောမော လှပ မှုကြောင့် လူတွေ ချီးကျူး နေတဲ့ ဒေါက်တာမ လေး